Milina CNC Lathe amidy, fanapahana vy, mpanamboatra sy mpamatsy Sina
Eto ianao: an-trano1 / Milina CNC Lathe amidy, fanapahana vy, mpanamboatra sy mpamatsy China ...
MESINY LATHE PRECISIONA MAFITRA HO AN'NY FANATSAM-POTANA
Ny milina lathe CNC dia safidy tsara raha manana sombin-javatra mila amboarina be dia be ianao. Afaka mifehy ho azy ny fihodinan'ny workpiece sy ny fivezivezena amin'ny alàlan'ny rafitra fanaraha-maso Nomery, tsy ilaina ny mifehy amin'ny tanana. Ohatra, mila peratra maromaro amin'ny habe samihafa ianao amin'ny baoritra boribory, ny lathe dia afaka manodina peratra mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny fampidirana ny habe sy ny kaody mifindra ao amin'ny rafitry ny rafitra. Aorian'ny fahavitan'ny fanodinana dia azonao atao ny manolo ny sangan'asa vaovao amin'ny tanana, na azonao atao ny manamboatra azy miaraka amin'ny manipulator (robot) mandeha ho azy, manatsara ny fahombiazan'ny fanodinana.
Ny safidin'ny lathe CNC dia miankina amin'ny haben'ny workpiece sy ny karazana fanodinana, arakaraka ny ambaratonga fitakiana mandeha ho azy dia azo ampifanarahana amin'ny manipulator sy fitaovana fanonganana puce automatique ihany koa. Izahay Tsinfa dia manana milina lathe CNC, avo lenta, fahamarinan-toerana tsara, ary ny karazany dia feno kokoa, mety amin'ny fividiananao indray mandeha.
Cnc lathe milina LTK6136
Machining savaivony: 300 / 360mm
halavan'ny workpiece: 500/750 / 1000mm
Masinina latina Cnc LTK6140
Machining savaivony: 400mm
Cnc lathe milina LTK6150
Machining savaivony: 500mm
Masinina latina Cnc LTK6180
Machining savaivony: 800mm
Inona no atao hoe CNCLathe milina?
Ny lathe CNC dia milina fanapahana vy tena mandeha ho azy fehezin'ny fandaharana CNC. be mpampiasa, azo avadika boribory, lavaka ary farany.
Eo am-piandohan'ny fampiasana dia tokony hametraka ny programa fanodinana workpiece isika, Clamping workpiece, fanitsiana, fametrahana fitaovana. Hetsika fampitomboana an-tanana, fivezivezena mitohy na ny fampiasana ny latte mihetsiketsika kapila tanana. Atombohy ny fandrindrana ny fahana ary tohizo ny milina. Azo ampiasaina hanovana ny tahan'ny fahana mandritra ny fanodinana ny switch rate. Mandritra ny fanodinana dia azo tsindriana ny bokotra FEEDHOLD, azo ajanona ny hetsiky ny sakafo, ary azo zahana na refesina amin'ny tanana ny fepetra fanodinana. Tsindrio indray ny bokotra CYCLESTART hanohizana ny fikarakarana. Mba hahazoana antoka fa marina ny programa dia tokony hojerena indray alohan'ny hanodinana azy.
Ny mari-pahaizana machining lathe cnc dia avo lenta, afaka manova automatique ilay fitaovana, mamita tsy tapaka ny fizotrany maro. Izy io dia fitaovana ilaina amin'ny fanapahana vy. Izy io dia fitaovana tena ilaina amin'ny fanapahana vy sy be pitsiny.
Fanodinana motera Servo amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny rafitra CNC, fahanana mandeha ho azy, mety amin'ny fanodinana batch.
Ny fandriana mihombo, ny puce chip mety, ny anti-bending ary ny anti-miolanolana dia matanjaka kokoa. Ny fampiasana ny habaka mahomby, mampihena be ny faritry ny masinina.
Loza lehibe spindle lavaka fanodinana sodina CNC dia afaka mamita ho azy sy mahomby ny fanapahana ny karazana fantsona mahitsy sy ny tadin'ny fantsom-pohy.
Ampio C axis sy lohan'ny herinaratra, miaraka amina fiasan'ny fikosoham-bary, automatique avo lenta.
Araka ny fitarihan'ny ampela, azo zaraina ho: Latina mitsivalana CNC sy latina marindrano CNC
Araka ny karazana làlan'ny torolàlana dia azo zaraina amin'ny: Latina amin'ny torolàlana amin'ny làlan'ny alàlan'ny làlan'ny làlan'ny alàlan'ny làlan'ny torolàlana sy ny latte rail.
Araka ny fitongilan'ny fandriana, azo zaraina ho: latina fandriana fisaka cnc ary latina fandriana slanting CNC.
Miorina amin'ny fizotry ny fanodinana dia mizara ho: General lathe CNC, lathe fantsom-pohy CNC ary milina mihodina
Fampiharana nyCNCLathe milina?
Ny lathe CNC dia mitana andraikitra tsy azo soloina amin'ny famokarana sy ny fanamboarana ny varingarina, ny vatan'ny fifandraisan'ny fiara, ny mitondra ary ny kodiarana. Izy io koa dia ampiasaina amin'ny fikojakojana ireo tobin'ny lalamby sy ny indostrian'ny solika mifandraika amin'ny fitrandrahana solika, ny fantsom-panafody simika ary ny fitrandrahana jeolojika. Amin'ny famokarana fitaovana, fitaovana, fitaovana fitsaboana, fanamboarana sambo ary indostria hafa koa dia mila mampiasa latina CNC.